Myat Shu - 2011 June
You are here : Myat Shu » Archives for June 2011
Published By Myat Shu On Thursday, June 30th 2011. Under သူတို့အာဘော်
Issues Human Rights (လူ့အခွင့်အရေး) လူ့အခွင့်အရေးကို တရားလွန် တရားမဲ့ ချိုးဖောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်က ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟာ လက်ညှိုးထိုး အခံရဆုံးသော ထိပ်တန်းစာရင်းမှာပါတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း လျစ်လျူရှုဖို့ မကောင်းပါဘူး။ ကမ္ဘာနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ မြန်မာရဲ့ image ပုံရိပ်ကို ပြင်ဆင်ချင်လျှင်တော့ ဒီပြဿနာကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လိုပါမယ်။ “သူတို့ မတရား စွပ်စွဲတာ… ဘာညာ” ဆိုပြီး ငြင်းချက်တွေ ထုတ်မနေပါနဲ့တော့။ အခြေအနေက ဘယ်သူကမှ (ကိုယ့်နိုင်ငံရေးအရ မဟာမိတ်တွေအပြင်ပေါ့) ယုံမှာ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အလုပ်နဲ့သာ လုပ်ပြလိုက်ပါ။ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်နိုင်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပြဖို့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, June 29th 2011. Under ထင်ရာမြင်ရာ
တလောက ဆရာကျော်စောမင်း (ခ) ဆရာကြည်မင်းရဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ဆရာက ဆောင်းပါးထဲမှာ မန္တလေးသားတွေ ဇာတိစွဲကြီးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောထားပါတယ်။ ဖတ်မိတဲ့အထဲမှာ စွဲနေတာက ရေချင်း အတူတူတောင် မန္တလေးသားတွေက ငါတို့ ကျုံးရေကမှ ချိုတယ်ဆိုတာတော့ သိပ်မနိမ့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောထားတဲ့ စာပိုဒ်ကိုပါပဲ။ (ဘဘကတော့ ဒီစာဖတ်မိရင် ပေါက်စတစ်ယောက် ဘာရှည်ထားပါလိမ့်လို့ တွေးချင်တွေးနေလိမ့်မယ်။ ကွန့်ချင်တာလေးတွေ ရှိလို့ ရှည်ခွင့်ပြုပါ ဘဘရေ) သဘောမကျလှပေမယ့် သဘောတူရမယ့် အချက်တွေ ရှိနေတာကိုး။ ကျွန်မတို့ ရုံးမှာ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသား ငါးယောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အပါအ၀င် သုံးယောက်ကတော့ မန္တလေး စာနယ်ဇင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေပေါ့။ ရုံးမှာ မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကောင်းကြောင်း ... Continue Reading
အစုံ အစုံ ပြောကြတဲ့အခါ…
Published By Myat Shu On Tuesday, June 28th 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
ကြည်ကြည်။ ။ ကိုညီရေ... မေ့နေလို့ တေးရေး မောင်သစ်မင်းကြီးဟာ နှစ် ၅၀ ပြည့်အဖြစ် စီးရီးခွေ မူပိုင်စီစဉ် ထုတ်ဝေခဲ့တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် သူရေးခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေတော့ စီးရီးခွေ မလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်။ ညီညီ။ ။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ သူကတော့ လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဥ်သီချင်းလေးတွေ စုပြီး တစ်ခွေလုပ်ပေးရင် ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ မောင်သစ်မင်းဆိုတာကလည်း အောင်မြင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေ ရေးခဲ့ ... မှတ်တိုင် စိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ကြည်ကြည်။ ။ အင်းနော်... မောင်သစ်မင်း ရေးခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်တွေ “အနီးဆုံးလူ” “တေးမြုံငှက်” “အကွာအဝေး” ... Continue Reading
ဟေတီငလျင်ကြီးတွင် သေဆုံးသူများကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း မြှုပ်နှံအား ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်
Published By Myat Shu On Monday, June 27th 2011. Under သတင်းတိုများ
ဟေတီနိုင်ငံကို စိစိညက်ညက် ကြေအောင် ငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီး နှစ်ပတ်အကြာ တိုက်တန်ရန်း (Titayen) ချိုင့်ဝှမ်းအတွင်းမှာ ကောင်းမွန်စွာ မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း မရှိတဲ့ လူသေအလောင်းပုံကြီးဟာ ပုပ်ပွပြီး အနံ့ဆိုးများ ထွက်နေခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရေးသမား ရောက်ဇီယာ (Rouzier) နဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ မြို့တော် ပို့အိုပရင့်စ် (Port-au-Prince) မှ ကုန်တင်ကားတွေနဲ့ သယ်ဆောင်ပြီး တိုက်တန်ရန်း ချိုင့်ဝှမ်းအတွင်း ပစ်ချထားတဲ့ အလောင်း ၂၅၀၀ လောက်ကို မြေထိုးစက်ကြီးများ ငှားရမ်း ကျင်းတူးပြီး မြှုပ်နှံပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ရောက်ဇီယာက ဟေတီနိုင်ငံရဲ့ ကြေကွဲစရာ အဖြစ်ဆိုးကြီး ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အခုလို ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း သေချာစွာ မလုပ်နိုင်ခြင်းအပေါ် ဘယ်သူ့ကိုမှ ... Continue Reading
ဂျေရုစလင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က ခွေးတစ်ကောင်ကို သေဒဏ်ပေး
Published By Myat Shu On Monday, June 27th 2011. Under နိုင်ငံတကာသတင်း
ဂျူးဘာသာရေး တရားရုံးတစ်ခုက တရားသူကြီးများကို စော်ကားခဲ့တဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက် ၀င်စားတယ်လို့ စိုးရိမ်ရတဲ့ သင်းကွဲခွေးတစ်ကောင်ကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပစ်ပေါက်သတ်ပြီ သေဒဏ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခွေးဟာ ဂျေရုစလင်က ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တရားရုံးတစ်ခုအတွင်း ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်မသွားဘူးလို့ အစ္စရေးဝက်ဘ်ဆိုက် ၀ိုင်နက် (Ynet) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခု ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ရှေ့နေတစ်ဦးရဲ့ ကျိန်စာကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် နှစ်ဆယ်က တရားသူကြီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရတာကို ပြန်လည်သတိရပြီး ရှေ့နေရဲ့ ၀ိညာဉ်ဟာ ခွေးရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲကို ၀င်ရောက် ပူးကပ်နေတယ်လို့ တရားသူကြီးများက အသေအချာ ပြောကြားကြပါတယ်။ ခွေးဟာ သူ့ကို သေဒဏ်ပေးဖို့ မဆောင်ရွက်မီမှာ လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ... Continue Reading
GSM ဖုန်းများ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ သယ်ယူခွင့် ဆောင်ရွက်နေ
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ချထားပေးလျက်ရှိသော ငါးသိန်းတန် GSM ဖုန်းများကို အင်တာနက်အသုံး ပြုနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ GSM ဖုန်းများတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သီးခြား လျှောက်လွှာတင်ရန် မလိုကြောင်း၊ CDMA ဖုန်းများကဲ့သို့ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လျှောက်ထားခ ကျပ်သုံးသောင်း ပေးသွင်းစရာ မလိုကြောင်းလည်း သိရသည်။ “ဂျီအက်စ်အမ်တွေကို ဒီနှစ်အတွင်းမှပဲ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဖုန်းလျှောက်ကတည်းက လျှောက်လွှာမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးခြားထပ်လျှောက်ဖို့ မလိုပါဘူး” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုပါက အသုံးပြုခ တစ်မိနစ်လျှင် ၄ ကျပ်နှုန်း ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ... Continue Reading
ခြောက်သိန်းခွဲတန်ဖုန်းများ နေ့ချင်းပြီးစနစ်ဖြင့် ချပေးမည်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ကျပ်ခြောက်သိန်းခွဲတန် အော်တိုတယ်လီဖုန်း(ကြိုးဖုန်း) အလုံးရေ သုံးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော်ကို နေ့ချင်းပြီး စနစ်ဖြင့် ချထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းထံမှ သိရသည်။ “အခု အသစ်ချပေးမယ့် ကြိုးဖုန်းတွေကို One Stop Service နဲ့ လျှောက်နိုင်မှာပါ။ တစ်နေ့တာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် အတွင်းမှာ လျှောက်ထားသူတိုင်းကို ချပေးသွားမှာပါ” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ အော်တိုတယ်လီဖုန်းများကို မြို့တ်ေစည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဖုန်းအရေအတွက်တိုင်း တစ်လုံးလျှင် ကျပ်ခြောက်သိန်းခွဲ၊ Deposit ကျပ်ငါးသောင်းနှုန်းဖြင့် ချထားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အိတ်ချိန်းအပိုင်ရုံးများတွင် One Stop Service အနေဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ယင်းခြောက်သိန်းခွဲတန် ကြိုးဖုန်းများကို One Stop ... Continue Reading
ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုသူများလာ
Published By Myat Shu On Sunday, June 26th 2011. Under သတင်းတိုများ
နိုင်ငံခြားဘာသာရပ် ၂၄ မျိုးကို မြန်မာဘာသာစကားသို့ ပြောင်းလဲလေ့လာနိုင်မည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်အသစ် ပေါ်ထွက်လာခြင်းကြောင့် အင်တာနက် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဘာသာစကားမဆို အဆင်ပြေစွာ လေ့လာနိုင်ကြောင်း အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ ထံမှ သိရသည်။ ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲရန် ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို http://www.myordbok.com ပထမဆုံး ၀င်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ကိုရီးယားစာလုံးကို ကိုယ်က မသိဘူးထား။ အဲဒီစာလုံးကို ကော်ပီကူးပြီးရင် ဒီ http://www.myordbok.com မှာ ရှိတဲ့ box မှာ paste လုပ်လိုက်ရန် အဲဒီ စာလုံးက ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဘာသာပြန်ပေးတယ်” ဟု တာမွေမြို့နယ်မှ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ဘာသာရပ်များမှာ အင်္ဂလိပ်၊ ... Continue Reading
၂၀၁၇ တွင် ၀တ္ထုတို နှစ်တစ်ရာပြည့်မည်
မြန်မာစာပေလောကတွင် ၀တ္ထုတို ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် လာမည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နှစ်တစ်ရာပြည့်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၀တ္ထုတို စာရေးဆရာ ရဲသျှမ်း၏ “သန့်ရှင်းသော ရယ်သံများနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ” စာအုပ်မိတ်ဆက် ဖြန့်ချိခြင်း အခမ်းအနားတွင် စာရေးဆရာ မောင်သာချိုက ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ယင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်း (အလယ်) စီးတီးစတားဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ “ကျွန်တော် အမှတ်အသား ရှိသလောက် ဆိုရင်တော့ ပြောရရင် ပထမဆုံး ၀တ္ထုတိုကို ကိုလိုနီခေတ်ကြီး ၁၉၁၇ ခုနှစ်က စတယ်ပေါ့။ နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဆိုရင် နှစ်တစ်ရာပြည့်တော့မှာပါ။ ပထမဆုံး သူရိယ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ မောင်သိန်းခင်၊ မသန်းရှင် ... Continue Reading
နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ပြီးနောက် ပဲခူး-စစ်တောင်း တူးမြောင်း တိမ်ကောလာ
ပဲခူး - စစ်တောင်း တူးမြောင်းကြီးသည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရေခမ်းခြောက်၍ တိမ်ကောလာကြောင်း ဝေါမြို့နယ် ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ “နိုဝင်ဘာလကျော်တာနဲ့ ရေခမ်းပြီ။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ စခမ်းတာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်က တစ်ခါတူးဖူးတယ်။ ပြန်ကောသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်တောင်းမြစ်ထဲက ရေက ရေတံခါးကနေ ၀င်တယ်။ ပြီးတော့ မိုးယွန်းကြီးအင်းထဲက လာတဲ့ရေက သဲ၊ နှုံးတွေ ပါလာတယ်။ မိုးတွင်းမှာ ရေထုက ရှစ်ပေလောက်ပဲ ရှိတယ်” ဟု ဝေါမြို့နယ် စာနယ်ဇင်း ဥက္ကဌ ဝေါ၀င်းမောင်က ပြောသည်။ ၎င်းတူးမြောင်း ရေခမ်းခြောက်လာခြင်းကြောင့် ကုန်စည်သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာ နှောင့်နှေးလာကြောင်း၊ အနီးအနား ကျေးရွာမှ ... Continue Reading